एक कप चिया : भलाकुसारीदेखि भाइचारासम्म::local sandesh
सोनाम पाल्जोर लामा / मङ्ल, कार्तिक २६, २०७६
जब तपाईं कुनै आफन्तकाहाँ पाहुना लाग्नुहुन्छ, तात्तातो चियाले तपाईंको स्वागत गर्नेछन् । जब तपाईं बिहान उठ्नुहुन्छ, एक कप चियाबाट आफ्नो दैनिकी सुरु गर्नुहुनेछ । जब कुनै साथीले तपाईंलाई भेटघाट वा भलाकुसारीका लागि आमन्त्रण गर्नेछन्, ‘आज यसो बसेर एक कप चिया पिउनुपर्‍यो’ भन्छन् । जब तपाईं कुनै कुराले फुरुंग हुनुहुनेछ, एक कप चियामा खुसी साट्न मन लाग्छ । जब तपाईंलाई दिक्कलाग्दो क्षण गुजार्नुपर्ने हुन्छ, एक कप चियाले ज्यानलाई फुर्ति बनाउने प्रयास गर्नुहुन्छ । चियासँग हाम्रो समाज यसरी अभिन्न रुपमा जोडिएको छ ।
चियासँग हाम्रो साइनो यतिमा मात्र सीमित छैन । चिया हाम्रै घर९आँगनको उत्पादन हो । चिया यस्तो उत्पादन पनि हो, जो हामी विश्व बजारमा बिक्री गर्छौं । नेपाली चियाले विश्वकै पारखीलाई आफ्नो स्वाद बाँढिरहेको छ । निर्यतजन्य कृषि उपजमा चियाले अग्रणी भूमिका खेलेको छ । यसर्थ चिया हामी उत्पादन गर्छौं, हामी नै टिप्छौं, प्रशोधन गर्छौं, पिएर त्यसको स्वाद लिन्छौं, नेपाली उपभोक्ताको तलतल मेट्छौं । त्यती मात्र होइन, विश्व बजारमा चिया बेचेर आयआर्जन पनि लिन्छौं । चियासँग नेपाली समाजको खास घनिष्ठता छ ।
चीनमा आमाबुवालाई भेट्न जाँदा महंगो वा स्तरिय चिया कोसेलीको रुपमा बोक्ने चलन छ । त्यहाँ चिया पिउने शैली पनि गजबको छ । चिया उनीहरुको पारिवारिक पेय हो, जो आपसी भलाकुसारी, भेटघाटमा आनन्दले पिउने गरिन्छ । कतिपय मुलुकमा चिया पिउँदा शान्तसँग ध्यान मुद्रामा बसेर पिउने गरिन्छ । पछिल्लो समय हामीकहाँ पनि चिया संस्कृति फस्टाउँदै गएको छ । अहिले नेपाली समाजमा गुणस्तरिय र महंगा चिया पनि खपत हुन थालेको छ । त्यसैगरी काठमाडौं जस्ता शहरी क्षेत्रमा चियाकै परिकार मात्र पाउने रेष्टुरेन्टरक्याफे सञ्चालनमा आइरहेको छ । ति क्याफेमा थरीथरीका चिया पिउन सकिन्छ । ४० बर्ष पार गरेकाहरु चिया पिएरै रमाइलो गरिरहेका छन् ।
नेपालमा स९सना दानादार सिटिसी चिया पिउने संख्या अत्याधिक छन् । हामी आफैले उत्पादन गरेको गुणस्तरिय, ताजा चिया विदेश पठाउँछौं र सामान्य चिया पिउने गर्छौं । यहाँ विश्वकै चिया पारखीले रुचाउने चिया उत्पादन हुन्छ । हिमाली माटो र हावामा उत्पादन हुने चियालाई उनीहरुले औधी रुचीपूर्वक सेवन गर्छन् ।
चियाको पनि मूलत तीन जात अर्थात ‘आमा बोट’ हुन्छ । एक, चिनियाँ जात । दुई, आसामी जात । तीन, क्याबोड जात । अहिले यी तीन जातबाट अनेक प्रजाति उत्पादन भइसकेको छ । ठाउँ एवं भूगोल अनुसार, हावापानी अनुसार अनेक चियाका उप-जात विकास भएका छन् ।
१. हृवाइट टी
यो कोटीको चियामा हल्का किसिमको बास्ना हुन्छ । यो सबैभन्दा शुद्ध एवं कम प्रशोधन गरिएको चिया हो । यसमा हामीले प्राकृतिक मिठास पाउने गर्छौं । एक पाते चिया भन्छ के के भन्छ । त्यो हृवाईट टी हो ।
विश्वभरी नै बिस्तारै आफ्नो प्रभाव बढाउँदै गएको चिया ग्रीन टी हो । यो विश्वको अरु महाद्विप भन्दा धेरै एशियामा धेरै पाइने गर्छ । केही ग्रीन टीमा फलहरुको मिश्रणका कारण यसको मिठास पनि फरक हुने गर्छ ।
६. डार्क टी
डार्क-टी भनेको भोट तिर खाने एक किसिमको चिया हो । यो नेपालमा बन्दैन । तर, यसको प्रयोग भने नेपालमा हुने गर्छ । चिया खान कसलाई सिकाउने ?